Ashwagandha, osisi nwere ike nke inyinya - AFRIKHEPRI
monday, Epril 6, 2020
Chakras, ogige nke ike na mmadụ - Leadbeater (PDF)
Taitu Betul - Egwuregwu Egwuregwu (PDF)
Ntọala nke nkà ihe ọmụma Esoteric - Blavatsky (PDF)
Lelee Ajọ Ifufe (2000)
TV Lobotomy: Eziokwu sayensị banyere mmetụta nke telivishọn
Ubuntu: Culture of Peace in Africa
Akụkọ dị ịtụnanya banyere ndị ohu Tromelin echefuru kwuru na a na-atọ ọchị
Spirulina - Nke a na - ebuli usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ
Okwu nke Thabo Mbeki na 2003 na UNESCO
Ndị 25 ndị ntorobịa Africa bụ ndị na-eme njem na mpaghara
Senegal emewo ihe ngosi ihe omuma kachasi elu nke obodo ndi mmadu
Mmalite nke ụmụ mmadụ dị ka mbadamba nkume Sumerian - akụkụ 1 (Audio)
Ire oku nke nlebara anya - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Ozizi nke Ramana Maharshi (Audio)
Ashwagandha, osisi maka ike nke inyinya
egwu AHUIKE NA MEDICINE
I meghachiri "Ashwagandha, osisi nwere f ..." Sekọnd ole na ole gara aga
Ashwagandha bụ osisi nwere afọ ojuju nke ezinụlọ Solanaceae. Ashwagandha bụ otu n'ime ụdị adaptogens e jiri kpọrọ ihe ma na-ejikarị na ọgwụ Ayurvedic. Ndị Botanists na-akpọ ya "Withania somnifera", anyị maara ya site na aha ndị a na-akpọkarị, dịka: Indian ginseng, ashwagandha, Sogade-Beru, udara oyi, Asana, Pevette, Ashgandh. N'ime ọgwụ phytotherapy anyị na-eji mkpọrọgwụ Ashwagandha, na ọgwụ Ayurvedic anyị na-ejikarị akwụkwọ.
1 Celsius) Etymology
Na Sanskrit, ashwagandha mejupụtara akụkụ abụọ: "Ashwa" pụtara ịnyịnya na "Gandha" pụtara ihe na-esi isi, n'ihi ya aha ya pụtara "onye nwere isi nke inyinya ahụ" n'ihe banyere ike inye "ike nke inyinya ” Aha umu anumanu a bu “somnifera” sitere na Latin, putara “ihi ura”.
2 Celsius) History
Withania somnifera bụ osisi sitere na Iraq na mpaghara North Africa. a na-ahụkwa ya na India ebe ejirila ya ihe karịrị afọ 3000. Ndị Arab oge ochie jiri mkpọrọgwụ nke osisi ahụ dị ka ihe tonic, aphrodisiac na maka mmetụta ndị a na-egbu egbu (mmetụta nke ịxụbiga mmanya ókè).
Na Pakistan, a na-ata ahịhịa nke Withania, nke na-emekwa ka a feelingụbiga mmanya ókè. Na Yemen, ndị obodo na-ejikwa mkpọrọgwụ Withania dị ka ihe e ji eme ezé.
Enwere ike ịkwadebe tii ka ọ bụrụ ọgwụ na - egbochi nrụgide na mgbọrọgwụ nke Withania. na-ata ata mgbọrọgwụ nke ahịhịa ahụ mere ka ọ na-arụ ọrụ. N’India, a na-atunye osisi a na Panax Ginseng (ezigbo Korean Ginseng).
A na-ahụ Ashwagandha n'ebe kpọrọ nkụ nke India na Africa.
4 Celsius) Nkọwa mkpụrụ osisi.
Ashwagandha bụ osisi nwere ọdịdị nke obere osisi na tụọ ihe dị n’agbata 30 na 75 santimita n’ịdị elu, ọ nwere ike iru mita 1.5.
Ashwagandha bụ osisi a na-eme kwa afọ nke mejupụtara:
ụdị oval nke oval
okooko osisi na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ odo
obere oroma-acha ọbara ọbara tomato
ihe na-egbu egbu.
azuokokoosisi kwụ ọtọ.
5 Celsius) Nkuru
Aswagandha bara ụba na iron, glycowithanolides (antioxidants), tannins, glucose, nitrate potassium, alkaloids na acids acids. Ndi ozo achoputara n’ime ya bu flavonoids, lactones na acetylsteryl glucosides
Alkaloids nke aswagandha bụ somnine, somniferin, withanolides na anferine. Withanolides kwesiri ịza ajụjụ maka ọtụtụ ọgwụ chọrọ Ashwagandha. Ha na - eme ka mkpụrụ ndụ nke sistem na - alụso ọrịa ọgụ na - alụ ọgụ. Ha na-egbochi mbufụt ma melite ebe nchekwa. N'akọtara ọnụ, omume ndị a kwadoro aha ọdịnala Ashwagandha dị ka tonic ma ọ bụ adaptogen.
6 °) Njirimara na omume ọma
Ashwagandha nwere mmetụta ndị nwere ike ịbụ ma tonic na ọgwụ ogwuura. Ejiri ya na elu doses, ọ bụ hypnotic. O nwere antistress, ma ọ bụ adaptogenic, mmetụta site na ọnụnọ nke acetylstérylglucosides dị na mgbọrọgwụ ya.
Ọ na - akwalite ọgụ nke anụ ahụ ịlụ ọgụ na - akpali usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. O nwekwara ogwu na ogwugwo.
Ekwuru na Ashwagandha na-eme ihe na-akpali akpali na akwara thyroid site na ịba ụba mmepụta nke T4, homonụ thyroid.
Taa, ashwagandha nwere nnukwu mmasị na ahụike. N'ezie, ọ ga - apụta dịka nnyocha ụfọdụ si gosipụta na ashwagandha ga - enwe akụrụngwa na - ebelata sel nke ọrịa cancer.
7 Celsius) Ngosipụta ọgwụgwọ
Dịkwuo ọgụ ka oyi na ọrịa
Mụbaa mkpa, nwoke ọmụmụ na libido
Lụọ ọgụ enweghi ike
Enyemaka na-edozi ọbara shuga
ehighị ụra nke ọma
8 Celsius) Contraindications
A na-egbochi Ashwagandha n'ime ụmụ nwanyị dị ime na onye na-enye nwa ara, yana ụmụaka na-arịa ọrịa na hyperthyroidism, n'ihi ọrụ ya na gland thyroid. Ka o sina dị, ụmụaka ejirila osisi a n'enweghị nsogbu ruo ogologo oge na India na ọbụna ụmụ nwanyị dị ime. Mgbe ewere ya na obere ego dị ka tonic. N'oge a na-enye nwa ara, ọ na - abawanye mmiri ara.
10 Celsius) Ọrịa Alzheimer na Indian ginseng
Ndị nchọpụta India achọpụtala na Indian ginseng (ashwagandha), osisi nke a na-eji na ọgwụ Ayurvedic ọdịnala, nwere ike rụọ oke ọrụ na usoro ọgwụgwọ iji buso ọrịa Alzheimer. N'ezie, dika ọrụ edeputara na Usoro nke Ọmụmụ Ihe Ọmụma nke Mba, mmịpụta nke osisi a ga - egbochi, n'ọtụtụ, ịmepụta amyloid plaques n'ime ụbụrụ.
Ekesinyela edemede a ugboro 88!
Pịa ebe a iji tinye edemede gi aka ...
Ekesinyela edemede a ugboro 83!